Xayeysiiska Dhaqanka vs. Xayeysiiska Macnaha guud: waa maxay faraqa u dhexeeya? | Martech Zone
Xayeysiiska dhijitaalka ah ayaa mararka qaarkood helaya rap xun kharashka ku lug leh, laakiin ma jirto wax dafiri kara, marka si sax ah loo sameeyo, waxay keeni kartaa natiijooyin xoog leh.
Shayga ayaa ah xayaysiisyada dhijitaalka ah ayaa awood u siinaya gaari ka ballaaran nooc kasta oo suuqgeyn dabiici ah, taas oo ah sababta suuqgeynayaashu ay u rabaan inay ku kharash gareeyaan. Guusha xayeysiisyada dhijitaalka ah, dabiici ahaan, waxay kuxirantahay sida ugu wanaagsan ee ay ula jaan qaadayaan baahiyaha iyo rabitaanka dhagaystayaasha bartilmaameedka ah.
Suuqgeeyayaashu waxay caadi ahaan ku tiirsan yihiin laba nooc oo xayaysiis ah si ay tan u fuliyaan - xayaysiis guud iyo xayaysiis dabeecadeed.
Macnaha ka dambeeya Xayeysiiska Dhaqanka iyo Macnaha guud
Xayeysiiska dhaqanku waxa uu ku lug leeyahay soo bandhigida xayaysiimaha isticmaalayaasha iyadoo lagu salaynayo macluumaadka ku saabsan dhaqankoodii hore ee wax baadhista. Tani waxay ku dhacdaa iyada oo la adeegsanayo xogta la ururiyey ee xuduudaha sida wakhtiga lagu qaatay mareegaha, tirada dhagsi ee la sameeyay, markii goobta la booqday, iyo wixii la mid ah.
Xogtan ayaa markaa loo istcimaalaa in lagu dhiso dhawr qof oo isticmaale ah oo leh sifooyin kala duwan kuwaaso xayeysiisyada khuseeya markaas la beegsan karo. Tusaale ahaan, haddii aad isku xidho alaabta A iyo B, dhagaystayaasha aad beegsanayso ee xiisaynaya A waxay u badan tahay inay la falgalaan B.
Dhanka kale, xayeysiiska guud waxay ku lug leedahay gelinta xayaysiisyada boggaga iyadoo lagu salaynayo nuxurka boggagaas. Waxay ku dhacdaa iyada oo la adeegsanayo habka loo yaqaan bartilmaameedka macnaha guud, kaas oo ka kooban qaybinta xayeysiisyada ku salaysan mawduucyada ku habboon ama ereyada muhiimka ah.
Tusaale ahaan, bogga internetka ee ka hadlaya buugaagta waxaa laga yaabaa inuu leeyahay xayeysiis loogu talagalay akhriska muraayadaha. Ama shabakad soo saarta fiidiyowyada jimicsiga ee bilaashka ah, hab-raacyada, iyo cuntada-cuntadu waxay u socodsiin kartaa xayeysiisyada cunto karinta oo ay weheliso jimicsigeeda - waa sidee Blender Fitness sameeyo.
Sidee buu u shaqeeyaa xayaysiis macnuhu?
Xayeysiyayasha macnuhu waxa ay adeegsadaan habka dalabka si ay u dhigaan xayeysiiskooda boggaga khuseeya.
Dejinta xuduudaha waa tallaabada ugu horreysa. Iyadoo mawduucyadu yihiin qaybo guud oo xayeysiisku ku haboonaan karo (sida moodada, siyaasadda, cunto karinta, ama jimicsiga), ereyada muhiimka ah ayaa awood u siinaya in si sax ah loo beegsado mawduucyadaas. Xayeysiisyada intooda badan, doorashada mawduuc gaar ah iyo ilaa 5-50 ereyada muhiimka ah ee mawduucaas waa inay ku filan yihiin.
Kadib, Google (ama mid kasta oo makiinadaha raadinta la isticmaalo) ayaa falanqayn doona boggaga shabakadeeda si ay ugu dhigmaan xayeysiisyada nuxurka ugu habboon. Marka lagu daro ereyada furaha ah ee uu xayaysiiyuhu doortay, makiinadda goobashadu waxay xisaabta ku darsan doontaa waxyaabaha sida luqadda, qoraalka, qaabka bogga, iyo qaabka isku xidhka.
Iyada oo ku xidhan sida gaarka ah ee uu xayaysiiyuhu doonayo in la gaadho, makiinadda goobidda waxa laga yaabaa inay tixgeliso boggaga keliya ee ku habboon ereyada muhiimka ah ee la bixiyay. Marka falanqaynta la dhammeeyo, xayeysiisku waxa la dhigi doonaa bogga mashiinka raadinta ee loo arko inuu ku habboon yahay.
Sidee buu u shaqeeyaa Xayeysiiska Dhaqanka?
Maadaama xayaysiinta habdhaqanku ay ku xidhan tahay dhaqankii hore ee isticmaalayaasha, waxa ugu horeeya ee xayaysiisayaashu u baahan yihiin inay sameeyaan waa inay la socdaan dhaqankaas. Waxay sidaas ku sameeyaan cookies, kaas oo ay geliyaan darawalka adag ee isticmaalaha mar kasta oo qof soo booqdo website-ka astaanta (oo uu doorto inuu aqbalo cookies).
Kukiyadu waxay ka caawiyaan inay arkaan halka adeegsaduhu ka baarayo, natiijooyinka raadinta ay gujinayaan, inta jeer ee ay booqanayaan bogga sumadda, alaabooyinka ay rabaan ama ku darayaan gaariga, iyo wixii la mid ah.
Natiijo ahaan, waxay bartilmaameedsan karaan isticmaalayaasha xayeysiisyada la xiriira haddii ay ku jiraan mareegaha markii ugu horeysay ama ay ku celiyaan iibsadayaasha. Xayeysiyeyaashu waxay sidoo kale isticmaalaan cookies si ay ula socdaan juqraadaha juqraafiyeed iyo cinwaanka IP si ay u beegsadaan isticmaaleyaasha xayeysiisyada deegaanka khuseeya.
Natiijada daba-galka hab-dhaqanka awgeed, isticmaalayaashu waxa laga yaabaa inay arkaan xayaysiisyada summada ay baadhayeen usbuucii hore markii ay akhrinayeen wararka onlaynka ama ay ka baadhayaan wax gabi ahaanba ka duwan. Inta ka hartay xiisahooda hore ama dallacaad maxalli ah oo khuseeya ayaa ah waxa ku dhiirrigeliya inay gujiyaan.
Qalab dhowr ah ayaa diyaar ah si ay uga caawiyaan ganacsiyada inay la socdaan hab-dhaqanka isticmaalaha oo ay ku beegsadaan xayeysiisyada si waafaqsan.
Keebaa Wanagsan: Macnaha Guud ama Dhaqanka?
Way fududahay in la jahawareeriyo labada nooc ee xayeysiiska, maadaama ay labadooduba muujinayaan xayeysiisyo ku salaysan danaha isticmaalaha. Si kastaba ha ahaatee, aad bay u kala duwan yihiin. Iyadoo xayaysiinta macnaha guud ay ku salaysan tahay bay'ada isticmaaluhu baadhayaan - dabeecadda waxa ku jira mareegaha, si kale loo dhigo - xayaysiisyada habdhaqanku waxay kuxirantahay ficilada uu isticmaaluhu sameeyay kahor inta uusan gaarin shabakada, sida bogga badeecada ee uu booqday.
Qaar badan ayaa u arka in xayaysiinta habdhaqanka ay tahay ka faa'iidada badan labada, maadaama ay awood u siisay shakhsiyaynta qoto dheer iyada oo la beegsanayo isticmaalayaasha iyadoo lagu saleynayo dhaqankooda dhabta ah halkii ay si fudud u iftiimin lahaayeen waxyaabaha la xidhiidha mareegaha. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira dhowr faa'iidooyin gaar ah oo ka mid ah xayeysiiska guud taas ayaa mudan in la xuso.
Fududeynta Hirgelinta - Faa'iidada ugu weyn ee xayeysiiska habdhaqanku waxay ku jirtaa heerka shakhsiyaynta ee ay bixiso. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay ku baaqaysaa xogta macaamiisha ballaaran iyo qalabka saxda ah si ay u falanqeeyaan waxaa laga yaabaa in aan la awoodi karin ganacsiyada leh kheyraad yar. Xayeysiiska macnuhu waa mid aad u fudud oo ka jaban in lagu bilaabo oo waxa uu bixiyaa ku habboonaanta si ay u noqoto hab aad u fiican oo lagu soo jiito booqdayaasha goobta. Markay taasi dhahday, shirkaduhu waxay si weyn ugu tiirsan yihiin cookies-ka dhinac saddexaad si ay u siiyaan khibrad xayeysiis oo gaar ah booqdayaasha websaydhka. Si kastaba ha ahaatee, iyada oo la kordhinayo qawaaniinta xogta (GDPR) ee laga soo ururin karo lagana isticmaali karo isticmaalayaasha, shirkaduhu waxay u baahan doonaan qalab aad u horumarsan iyo software si ay u maareeyaan ololayaasha xayaysiisyada macnaha guud maadaama ay jirto hal talaabo oo dheeri ah oo ku lug leh, ie, si aad u weydiisato ogolaansho isticmaalaha si uu u ururiyo xogtooda. Sidaa darteed, haddii aad rabto in aad dhiirigeliso korsashada dhijitaalka ah ee degdega ah iyo heerka sare ee fahamka ku saabsan isbeddelada cusub ee xayaysiinta ee kooxdaada suuq-geynta, xaaladahan oo kale, socodka isdhexgalka ayaa lagu dhex dari karaa software kaaga si aad u tababarto.
Tusaale ahaan, waxaad dhisi kartaa socod-socod si aad ugu dhiirigeliso xasuusinta xayaysiiyayaashaadu iyagoo samaynaya olole xayaysiis ah gudaha Midowga Yurub. Waxaad geyn kartaa liiska hubinta ama moduleka microlearning si aad u siiso isticmaalaha ugu dambeeya ee qaniinyada qaybo ka mid ah macluumaadka si ay u daboolaan dhammaan saldhigyada inta ay dejinayaan ololaha oo ay u raacaan dhammaan sharciyada si sax ah. Taasi waxay ina keenaysaa qodobka labaad.
Privacy - Ciqaabaha si xun u isticmaalka macluumaadka isticmaalaha gaarka ah waxay noqon karaan kuwo aad u weyn. Intaa waxaa dheer, cookies hadda si toos ah uma aha website-ka, isticmaalayaashuna waxay u baahan yihiin inay si ikhtiyaari ah u galaan iyaga, taasoo ka dhigaysa dib u habeynta mid aad u adag. Waxaad arkaysaa, isticmaalayaashu waxay rabaan sirnimo weyn, oo ay ku jirto doorashada, daahfurnaanta, iyo xakamaynta sida xogtooda loo isticmaalo. Dabiici ahaan, nidaamka deegaanka ee shabakadu waa inuu la jaanqaadaa baahidooda sii kordheysa. Iyadoo Safari iyo Firefox ay mar hore meesha ka saareen buskudka dhinac saddexaad, Google ayaa sidaas samayn doona laba sano ka badan. Laakin mar haddii xayaysiisku aanu ku tiirsanayn cookies, xayaysiiyayaashaadu uma baahna inay ka werweraan inaanay u hoggaansamin markay soo bandhigaan xayeysiiskooda.
Ilaalinta Sumcadda Sumadda - Hal dhinac oo badbaado ah ayaa shaki la'aan ah u hoggaansanaanta sharciga ah. Si kastaba ha noqotee, sumcaddu waxay noqon kartaa shay aad u dhib badan in la ilaaliyo, gaar ahaan maadaama aysan xayeysiiyayaashu mar walba xakameyn karin halka ay xayeysiiskoodu ka soo baxaan. Badanaa, summadaha waxay la kulmaan dib u dhac sababtoo ah xayeysiiskooda ayaa lagu soo bandhigay goobaha dadka waaweyn ama kuwa leh aragtiyo xagjir ah. Tani, si kastaba ha ahaatee, waxay ahayd natiijada dhaqanka isticmaale. Taas bedelkeeda, xayeysiiska macnaha guud wuxuu dhigayaa bogga shabakadda waxyaabaha udub dhexaad u ah, calaamaduna waxay gacanta ku haysaa boggaas iyagoo tilmaamaya mawduucyada, mawduucyada hoose, iyo ereyada muhiimka ah ee la xidhiidha xayeysiiska.
Muhiimadda Weyn - Malaha aasaasiga ah ee xoojinaya xayeysiiska habdhaqanka waa in isticmaalayaashu ay rabaan inay arkaan xayeysiisyada la xidhiidha isbeddellada guud ee habdhaqankooda wax raadinta. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inay si fiican u dhacdo in rabitaankooda hadda aysan ku dhicin isbeddelladaas. Tusaale ahaan, qof baadhaya qalabka ciyaaraha lagama yaabo inuu rabo inuu arko xayaysiisyada adeegyada naqshadaynta garaafyada, xataa haddii ay hore u baadheen adeegyada naqshadaynta garaafyada. Taas bedelkeeda, xayeysiis loogu talagalay budada borotiinka dabiiciga ah ayaa laga yaabaa inay aad ugu habboonaato xaaladda maskaxeed ee hadda oo ay soo jiidato dhagsiimo badan.
Ma jirto khatar indho la'aan banner - Taasi waa dhacdo caadi ah oo isticmaalayaashu ay si hoose u barteen inay iska indhatiraan xayeysiisyada. Tusaale ahaan, goobta tigidhada filimada ee ku socota xayaysiisyada goobta dib u eegista filimada ayaa macno badan ka samaynaysa u adeegida xayaysiisyada la xidhiidha qalabka wax lagu kariyo.
Xayeysiiska macnihiisa khuseeya ee summadaha aan caanka ahayn ayaa 82% ay dadku dib u soo celiyaan in ka badan marka loo eego xayaysiisyada noocyada caanka ah balse aan khusayn waxa ku jira bogga.
Intaa waxaa dheer, dad badan ayaan ku raaxaysanin xayeysiisyada la shiiday ee ku salaysan hawlahooda wax baadhiseed ee hore. Waxaa jira dareen guud oo ah in ay kormeeraan shirkado waaweyn kuwaas oo ka celin kara dadka inay gujiyaan xayeysiiska xitaa haddii xayeysiinta lafteedu ay khusayso. Dhanka kale, xayaysiinta macnaha guud waxay ku haboontahay xayeysiiska bogga shabakada, taasoo ka dhigaysa inay u muuqato mid ka yar 'u eg' oo aad loo aamini karo in la gujiyo. Marka isticmaalayaashu arkaan xayaysiisyada khuseeya, daawashada xayaysisku waxay helaysaa kor u kac, waxaana jirta koror suurtagal ah oo ah heerka gujis sare.
Sida laga soo xigtay Adpushup:
Beegsiga macnaha guud waa la isku celceliyay 73% korodhka waxqabadka marka la barbar dhigo beegsiga habdhaqanka.
49% ee suuqyada Maraykanka ka faa'iidayso beegsiga macnaha guud maanta.
31% ee calaamaduhu waxay qorsheynayaan inay kordhiyaan kharashaadkooda xayaysiinta macnaha guud sannadka soo socda.
Waa dhan ku saabsan "context"
Gabagabadii, labaduba waxay leeyihiin doorar kala duwan oo ay ku ciyaaraan istiraatiijiyadda suuqgeynta dhijitaalka ah, iyo noocyo kala duwan ayaa laga yaabaa inay u qoondeeyaan miisaanyo kala duwan.
Laakiin waxaa jira waqtiyo marka xayaysiinta macnaha guud ay tahay doorasho wanaagsan. Waxay ka caawisaa summadaha inay bilaabaan olole aan u baahnayn ilo badan si loo hirgeliyo qumman. Waxa kale oo ay hubisaa in aanay u baahnayn in ay isticmaalaan xogta isticmaalaha shakhsi ahaaneed ama ay ka welwelaan u hoggaansanaanta GDPR. Waxay si fudud u tagi karaan bartilmaameedka ereyga muhiimka ah.
Ugu dambeyntii, waxa muhiimka ah waa ogaanshaha waxa aad rabto in xayeysiisyadaadu ay fuliyaan, sida aad u rabto inaad u dareento macaamiishaada sumaddaada, iyo inta aad diyaar u tahay inaad ku bixiso saameyntaas. Kadib, samee doorashadaada - natiijadu waxay bixin doontaa waqti ka dib.
Tags: qaybta xayeysiiskabuskudka xayaysiiskaereyada muhiimka ah ee xayeysiiskaasturnaanta xayeysiiskakhuseeya xayeysiiskaxayeysiisqaybta xayaysiiskaindho la’aanta calankaxayaysiis habdhaqansumcad sumadeedbaadh taariikhdaMacnaha guudxayasiimaha xayeysiinta ahxayeysiiska guudfaa'iidooyinka xayaysiinta macnaha guudtirakoobka xayaysiisyada macnaha guudblenderGDPRxayaysiisyada juqraafigagoogle-ka macnaha guudgoogle bandhigay xayeysiisxayeysiisyada ciwaanka ipxayeysiiska deegaankaraadinta xayeysiiska
Caddayn: Khariidadaha Kulaylka ee Bilaashka ah iyo Duubista Kulanka ee Hagaajinta Mareegta